कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पुस मसान्तमा ! – Hamronigrani
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पुस मसान्तमा !
हाम्रो निगरानी । ६ कार्तिक २०७८, शनिबार १२:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘विभिन्न कारणले रोकिएका जिल्ला अधिवेशनहरू छठपछि हुन्छ र तिहारअघि सबै जिल्लाको सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान भइसक्छ,’ कांग्रेस सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चितवनमा गत बुधबार संचारकर्मीसँग भनेको यो भनाईले पुष्टि गर्छ की कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फेरि सर्छ ।
पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार भएको भए १८ असोजमै कांग्रेसका सबै जिल्ला अधिवेशन सकिइसक्थे । तर, अहिलेसम्म हिमाली एक दर्जन जिल्लाको मात्रै अधिवेशन सकिएको छ । हिमाली जिल्लामध्ये रसुवामा क्रियाशील सदस्यताको विषय मिल्नै बाँकी छ । त्योबाहेक डोल्पा र सोलुखुम्बुको अधिवेशन बाँकी रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।
१८ असोजमा जिल्लाको अधिवेशन सकिएपछि कात्तिक १० देखि १२ सम्म कांग्रेसको सात प्रदेशमा अधिवेशन हुने कार्यतालिका थियो। तर, समय घर्किएकाे छ । प्रदेश २ का सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा अझै सदस्यताको विवाद मिल्न सकेको छैन । सँगै अधिवेशनको तालिका नै मिचिसकिएको हुँदा अब कांग्रेसले चाहेर पनि यस अघि घोषित मंसिर ९ देखि १३ सम्म १४ औं महाधिवेशन गर्न नसक्ने पक्का भएको हो । किनकी र जिल्ला र प्रदेशकाे अधिवेशनले महाधिवेशन स्वत: धकेल्छ ।
यसबारे पार्टीले औपचारिक घोषणा गरेको छैन । तर, अब घोषणा गरेर महाधिवेशन फेरि सार्ने बाहेकको विकल्प कांग्रेससँग छैन ।
रसुवा, बारा र रौतहटको सदस्यता मिलाउन बाँकी भएकोमा बाराको सदस्यता टुंगिएको छ । अब रौतहट र रसुवाको सदस्यता टुंग्याएर छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बसी महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्ने तयारी छ ।
‘तल्लो तहमा सदस्यताको विषय नटुंगिंदा चाहना गर्दागर्दै पनि महाधिवेशनलाई केही पर सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतले नेपालवाचसँग भन्यो, ‘दुई जिल्लाको सदस्यता मिलेपछि अब केही दिनमै केन्द्रीय समितिको बैठक बसी महाधिवेशनको मिति केही समय सार्ने निर्णय गर्छ ।’
यस अघि घोषित समय मंसिर ९ देखि १३ मा महाधिवेशन नहुनु भएपछि अब पुस मसान्तसम्म सार्ने कांग्रेसको तयारी छ । ‘परिस्थितिले नै नसारी नहुने अवस्था आयो । धेरै पछि सार्दा स्थानीय तहको निर्वाचनतिर हामी पुगिसक्छौं’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले मंसिरबाट सारेपछि पुस मसान्तसम्ममा १४ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तोक्ने तयारी छ ।’प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा त वडा तहको अधिवेशन नै प्रारम्भ भएको छैन ।
समयमा काम नगरी पटकपटक अधिवेशन सारिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘एकपटक होइन दुई पटक होइन चारपाँच पटक महाधिवेशन सार्नुपर्ने अवस्थमा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरु किन पुग्नुभयो ? यो उहाँहरु सबैको कांग्रेस समाप्त पार्ने खेल हो’ कोइरालाले नेपालवाचसँग भने, ‘सुरु देखि नै तीनवटै निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो । एमालेले देशैभर एकैपटक अधिवेशन गर्न सक्छ हामी किन सक्दैनौं ? अधिवेशन गर्ने क्षमता हाम्रा नेतामा छैन भने कांग्रेसका नेताहरु कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न ।’
समयमा काम नगरी अधिवेशन सारेर पदाधिकारी, क्रियाशील छानविन समितिका सदस्यहरु नालायक बनेको कोइरालाको भनाई छ ।
हुन पनि कांग्रेसले एकपटक होइन चारपटसम्म अधिवेशन समयमा नगरी सार्न लागेको हो । पार्टी संस्थापनले झण्डै ५० दिन थप गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यो समयमा पनि नियमित काम नभए महाधिवेशन हुन गाह्रो छ । किनकी अझै सदस्यताको विषय नमिलेको, प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्लामा अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नभएकोले कांग्रेसलाई चुनौती छ ।